Ukuvikelwa Komthengisi +
Ukubuyekezwa okungu-100 +
Ungahlala Kanjani kwi-radar yokumiswa ngaphandle kokuchitha izinkulungwane zamaDola Ekumangalisweni Kokumiswa.
Bonke Abathengisi bayazi ukuthi izinqubomgomo ze-Amazon ziya ziqina usuku nosuku ikakhulukazi lapho Abathengisi benza iDropShipping. Ukuvikelwa komthengisi kuzokwehlisa amathuba akho okwenza ukuthi kungasebenzi futhi kuzokunika onqenqemeni ngokuthatha isinyathelo ngokushesha ezindabeni ezihlobene ne-Akhawunti Yezempilo.
Kungani + Ukuvikelwa Komthengisi Kubalulekile?
Wonke umuntu uyazi ukuthi ukumiswa kwe-Amazon kuyisivumelwano sangempela. Ama-Akhawunti ama-3 kwayi-10 awenziwa asebenze ngisho nangemva kokufaka izikhalazo eziningi. Uma i-Akhawunti imisiwe, usebenzisa u- $ 1k - $ 2k ekumiseni ngakunye, futhi namanje, akukho I-GUARANTEE ukuthi uzosebenza. Ukuvikelwa Kwabathengisi kuzokonga isikhathi sakho nemali yakho, futhi kuzokwehlisa namathuba akho okumiswa abe ngu-80% okuyinto Wonke umthengisi ayifunayo. I-A + Seller Protection isebenza njengeLifeline yabo bonke Abadayisi be-Amazon.
Amathuba Okumiswa Kwehle Ngama-80%
Konke ukwephulwa kwenqubomgomo kuzosingathwa ngokushesha okuzonciphisa amathuba okumiswa ngokuzenzakalela
Impilo ye-Akhawunti Esimeni Esihle
Kuze kube manje Ukuthumela ngomsebenzi nokusebenza kwamakhasimende kuzogcina impilo ye-akhawunti isesimweni esihle kakhulu
Ukuhlanganiswa Kokumiswa Okuzayo
Uma umiswa ngisho nangemva kokubhekana nazo zonke izingqinamba ngokushesha. Uzokhokhelwa ukumiswa okwesikhashana.
Ngaphansi kwezingu-2 Ukwephulwa Kwemigomo noma Izimangalo ze-AZ ku-Akhawunti.
I-Akhawunti Yezempilo Yokuhlanza
Ukumbozwa Ngokumiswa Kwesikhathi Esizayo
UNGAPHUTHELWA ITHUBA LOKUTHOLA
OKWENGEZIWE 5% -10% Isaphulelo
Shesha- Lo Mnikelo Wokuphromotha Uzophela ngo:
Unombuzo ngalolu hlelo? Bona uhlu olungezansi lwemibuzo yethu ebuzwa njalo. Uma umbuzo wakho ungabhalisiwe lapha, sicela uxhumane nathi.
Ngingakwazi ukubhalisa? Uma nginokwephula okungaphezulu kokungu-2 kwenqubomgomo ku-akhawunti?
Yebo, kufanele ukhokhe imali eyengeziwe ezinyangeni ezi-4 zokuqala.
Amagama angeziwe we-Premium ayachazwa :
Ukwephulwa okungu-3-5: $ 49
Ukwephulwa okungu-6-10: $ 99
Ukwephulwa okungu-11-15: $ 149
Ukwephulwa okungu-16-20: $ 199
Uma ngimiswa ngemuva kokubhalisela uhlelo, kufanele ngikhokhe imali ethile?
Udinga nje ukukhokha imali engu- $ 100 yesevisi ngohlelo lwethu olusheshayo ($ 849) kanye no- $ 200 kuhlelo lwe-premium ($ 1299)
Kuthiwani uma ngimiswa ngenyanga efanayo ngemuva kokubhalisela lolu hlelo?
Kufanele ube nokubhaliselwe okungenani izinyanga ezintathu ukuze umbozwe ngokumiswa. Uma umiswa ngaphambi kwezinyanga ezi-6 uzodinga ukukhokha u-6/1 kuphela wamaphakheji wethu wezikhalazo zencwadi yokudlulisa amacala.